Wararka - Cadadyada Alaabta ee Muhiimka ah Qolal jiif oo kasta ayaa u baahan
Siyaabo badan, qolka jiifka waa qolka ugu muhiimsan ee guri kasta. Waxay kaa caawineysaa inaad nasato oo aad nasato maalin dheer ka dib, iyo qaabeynta qolka jiifkaaga waa inay ujeedkeedu tahay abuuritaanka jawi ku habboon oo dhiirrigeliya hurdada. Maalgelinta alaabta guriga ku habboon waxay kaa caawin kartaa inaad tan gaarto oo aad sare u qaaddo tayada iyo tirada hurdadaada. Aynu jaleecno qaar ka mid ah qalabka muhiimka ah ee alaabta guriga ee qolka jiifka ay tahay inuu lahaado.
1. Kursi raaxo leh
Ma waxaad tahay nooca qofka jecel akhriska ama kabashada koob shukulaato kulul intaadan seexan kahor? Waxaa jira sababo badan oo loo iibsado alaabta guriga, laakiin inaad kuhesho fadhiga qolkaaga jiifka ayaa si fiican kuugu shaqeyn doona. Waxay kaa caawin doontaa inaad nasato oo aad nasato intaad isu diyaarineyso inaad seexato. Waxaad heli kartaa kursi gacmeed, dib-u-fadhiis, ama xitaa kursi lulaya. Waxay ku xirnaan doontaa dhammaan baahiyahaaga iyo dookhaaga. Marka laga reebo kor u qaadista raaxada, ku darista qalabka saxda ah ayaa qurxin kara qolkaaga jiifka.
2. Sariir Tayo leh
Sariirtaadu waa sheyga ugu muhiimsan ee qolka jiifkaaga. Joodar raaxo leh iyo qaab muuqaal leh ayaa waddo dheer u mara dhiirrigelinta hurdo caafimaad leh oo nasasho leh. Haddii aad rabto inaad ogaato waayo-aragnimo hurdo oo raaxo leh, waa inaad tixgelisaa inaad maalgashato sariir tayo leh, waasac ah, oo raaxo leh.
3. Shaxda sariirta dhinaceeda
Qalabka saxda ah, waxaad u beddeli kartaa qol jiif ah oo caajis ah una noqosho dib-u-noqosho boqortooyo. Miiska sariirta dhinaceeda waa qayb muhiim ah oo qolka jiifka ah oo dhan ah. Waxay kaabeysaa sariirtaada waxayna kaa caawineysaa inaad ilaaliso waxyaabaha muhiimka u ah habeenkiina intaad gaari laheyd si aadan sariirta uga kicin ama u dhaqaaqin markaad seexaneyso. Halkan, waxaad dhigan kartaa galaas biyo ah, muraayadaha akhriska, buugaag, ama daawo si ay u fududaato in la gaaro marka aad sariirta jiifto.
Guri labis waa shey lama huraan u ah qolka jiifka oo dhan. Waxay haysaa dhammaan dharkaaga daruuriga ah waxayna ku haysaa dharkaaga si habeysan. Waxay sidoo kale yareyneysaa jahwareerka qolka jiifka iyadoo wax walba wada jiidaya. Waxaad dooran kartaa mid keli ah ama labis hufan oo ku xiran hadba doorbidkaaga.
5. Shaxda Dharka
Qol jiif kasta oo riyadiisu ku jirto waa inuu ku jiraa dhar xidhasho. Waxay ku dareysaa taabasho xarrago leh waxayna kaa caawineysaa inaad alaabtaada habeysnaato. Dhar-xidhaashu wuxuu bixiyaa hawlo kala duwan, sida keydinta agabkaaga shaqsiyeed, dharka, lacagta yar, ama waxyaabaha kale ee yaryar si nadiif ah. Marka laga reebo keydinta, labbiska wuxuu kuu keenayaa qaab dheeri ah oo qurxinta qolkaaga. Tan ugu muhiimsan, ku darista muraayaddu waxay kaa caawinaysaa inaad ilaaliso qurxintaada shakhsi ahaaneed iyo muuqaalkaaga jeeg maalin kasta.